ICLỌ AH LAR SH ICLỌ Ọrụ (SHANGHAI HEADQUARTER)
Lọ Ọrụ Ọdụ Iwu Shanghai bụ ụlọ ọrụ iwu na-arụ ọrụ na isi ụlọ ya na Shanghai. E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 2004, ma hazigharịrị na March nke 2018 site na nke a na-akụzi ya na ndụ ọhụrụ. A maara ya dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ iwu kachasị ọhụrụ nke China nwere ụkpụrụ nke “Ahụmịhe, Mba ụwa na N'ọtụtụ“, Nke Ahụmịhe na-ezo aka na ịchọrọ na onye ọka iwu ọ bụla na ọdịda ga-enwe otu isi mpaghara iwu na-arụ ọrụ na ọtụtụ ihe omume abụọ ka ndị ọkachamara anyị wee nwee ike ịnye ọrụ kacha mma na ahịa iwu; Internationalization na-ezo aka anyị oké ọchịchọ ebumnuche ike a n'ezie mba iwu iwu ike n'ụlọ ke China, na n'ọtụtụ na-ezo aka na echiche na anyị chọrọ ịbụ a ike ike ma na-achọghị ịbụ a dị nnọọ "nnukwu" ike dị ka anyị chọrọ iji belata nsogbu nke esemokwu ọdịmma ma jikwaa ihe egwu anyị. Ọdịda na-agba mbọ ịbụ ụlọ ọrụ iwu mba ụwa kachasị elu n'ụwa nke ndị ọka iwu China na-eduzi.
Ndị ọka iwu na ọdịda ọdịda nwere ike inye ndị ahịa ọrụ niile na ọrụ niile dị ka iwu ezinụlọ (atụmatụ ụlọ), ngwaahịa, akụrụngwa, ike, ezigbo ala, ụlọ na ụlọ, ego na mkpuchi, ahụike, ọgwụ, nkwukọrịta, mgbasa ozi, arịa ọgụgụ isi, ntụrụndụ yana ahịa ndị ahịa na China.
Ọdịda ala nwere alaka ụlọ na Beijing, Shenzhen, Lanzhou, Changsha, Wulumuqi, Xi'an na Taiyuan nwere ọtụtụ ihe na-abịa n'afọ ndị na-abịanụ. Dika ụkpụrụ nke Aghụ ike Internationalization, o nwere ngalaba ofesi na United States, India (Delhi, Mumbai, na Pune), Singapore, Indonesia, Bangladesh, Philippines na Cambodia. “Territorykèala” anyị ga-eme n’ọdịnihu gbasaara ọtụtụ mba na-emepe emepe n’ụwa niile.
Accessnweta ikpo okwu zuru ụwa ọnụ, ndị ọka iwu anyị na ndị ọka iwu nwere nnukwu netwọkụ na gburugburu ụwa na-arụ ọrụ na ndị ahịa iji nyere ha aka ịghọta
nsogbu obodo, na-agagharị site na mgbagwoju anya mpaghara ma chọta azụmahịa
azịza nke na-eweta uru asọmpi maka ndị ahịa anyị.
Divlọ Ọrụ Iwu Alụkwaghịm na China, Familylọ Iwu Iwu Ezinụlọ nke China, Onye nnọchi anya ụlọ ọrụ iwu nke China,